Agaasimaha Barnaamijka Fanka
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay raadinaysaa hogaamiye khibrad leh oo tabaruc ah si uu u hago waxa caan ah Farshaxanka barnaamij deeq-lacageed, kaas oo taageera farshaxanada shaqada iyo ururada ka caawiya sidii ay hore ugu mari lahaayeen fanka iyo xirfadda. Doorkani wuxuu kormeeraa horumarinta istiraatiijiyadda iyo fulinta geedi socodka deeqaha Arts, wuxuu u horseedaa dadaallada ku saleysan farshaxanka, wuxuuna horumariyaa iskaashi iyo iskaashi u saamaxaya kobcinta awooda baaxadda ballaaran. Isaga oo ka warbixinaya Madaxweyne kuxigeenka barnaamijyada, Agaasimaha Barnaamijka Fanka wuxuu ku biirayaa waqti xasaasi ah taariikhda Aasaasiga iyadoo hay'addu sii horumarinayso dhawaantan la ansaxiyay. Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Mowqifkani wuxuu ku biiri doonaa koox hawleed wada shaqeysa oo agaasimayaal barnaamij u horseedaya kooxahooda si iskaashi ah waqtiyada mugdiga iyo isbedelka ku dhaca sida Foundation u kobcaayo.
Barnaamijka Farshaxanka ayaa wali ah muhiimada koowaad u ah aasaaska. Iyada oo lagu dhisayo dhaxalka McKnight iyo sumcadda aan la jaanqaadi karin oo ah maalgeliye faneed, agaasimaha barnaamijka cusub wuxuu fursad u helayaa inuu qaabeeyo istiraatiijiyaddiisa deeq-lacageedka si uu ula sii wado jihada istiraatiijiyadeed ee Foundation iyo laba aag oo diiradda la saarayo: kor u qaadista xalalka cimilada iyo dhisidda Minnesota oo caddaalad iyo sinnaan badan loo wada dhan yahay. . Marka lagu daro hoggaanka gudaha, doorkan wuxuu matalaa aasaaska gudaha, dhisidda xiriir dhab ah oo ka dhex dhaca bulshada farshaxanka, iyo sidoo kale ururada lammaanaha iyo ururada rayidka iyo hay'adaha dowladda. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan isbedeladaan, fadlan aqri dhajintaan.
Hoggaaminta Istaraatiijiyadeed iyo Hawleed
Si firfircoon ula shaqeyso agaasimayaasha isku faca ah iyo hoggaanka guud ee aasaaska si loo mideeyo geedi socodka, loo fududeeyo isbedelka, loo hubiyo isku-duwidda, iyo gaarista yoolalka hay'adda.
Si firfircoon u fududee wadahadalka gudaha oo lala yeesho asxaabta, shaqaalaha, iyo hogaaminta si wax looga qabto istiraatiijiyadda kobcinta aasaasiga ah, qaab dhismeedka, iyo nidaamyada.
Kooxda iyo Dhaqanka
Dhis, xoojiso, horumariyo, oo taageer koox wax qabad sarreysa oo labo Sarkaal oo Barnaamijka ah, oo ay kujirto maareyn waxtar leh ee ilaha farsamada iyo dhaqaalaha.
Horumar u sameynta Hay'ada Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada iyo kobcinta dhaqan ku habboon qiyamka abaabulka ee raadinta, xurmada, sinaanta, iyo mas'uulka.
Muuji kartida dhaqanka iyo sirdoonka shucuurta oo aad la xiriirto nacnac iyo furfurnaan markii aad ka hadlaysid arrimo xasaasi ah sida moodooyinka maskaxda / fikradaha, dhaqdhaqaaqa awooda, qaababka taariikhiga ah, iyo sinnaan la'aanta isir.
Muuji qadarin qotodheer, u heellan, iyo u habeyn dadaallo badan oo farshaxan, qaababka muujinta, iyo waxqabadka.
Si toos ah u maaree galka borotokoolka deeq-lacageedka oo aad kormeerto geedi socodka deeq-bixiyaha ee dhammaan barnaamijyada Arts-ka.
Samee oo isuduwe dadaallada la xiriira farshaxanka iyada oo lala kaashanayo kooxda barnaamijka lana taageero shaqada kooxda ee duurka.
Aqoonso lammaaneyaasha aasaasiga ah qiimeynta la wadaago, qiimee diyaarinta wada-hawlgalayaasha iyo awoodda hoggaaminta isbeddelka, iyo ka qaybgal la-hawlgalayaasha ballan-qaadyada si loo fududeeyo isbeddel istiraatiijiyadeed, isbeddelada nidaamyada, iyo dadaallada dhisidda garoonka.
Toosi qaabeynta iyo maareynta barashada iyo qiimeynta barnaamijka.
Joogtee aqoonta hadda ah ee muuqaalka fanka ee gobolka Minnesota si loogu daro arrimaha, isbeddelada, iyo qodobada kale ee saamaynaya farshaxan-yaqaannada Minnesota.
Iyada oo la taageerayo ahmiyadaha ballaaran ee aasaasiga ah iyo aagagga cusub ee diiradda la saarayo — horumarinta hormarinta cimilada iyo dhisidda Minnesota aad u caddaalad badan oo loo dhan yahay — raadiso in la fahmo oo la muujiyo dariiqooyinka barnaamijyada farshaxanka ay u taageeraan una waafaqaan istiraatiijiyada heerka iyo jihada ganacsiga.
Ku barbaari oo kobci xiriiryada istiraatiijiyadeed ee Minnesota oo dhan shakhsiyaadka iyo hay'adaha wadaaga qiyamka aasaasiga ah ee Ururka iyo danaha barnaamijka.
U wakiilka aasaaska la-hawlgalayaal heer-sarre ah, oo ay ku jiraan daneeyayaasha dibedda iyo deeq-bixiyeyaasha, tabarucyada kale, iyo sharci-dejiyayaasha.
Caddaynta guusha horumarka iyo hirgelinta barnaamijyada waxtarka leh iyo si hufan ugu gudbinta qaab-dhismeedka barnaamijka fikradaha deeq-bixiyeyaasha, la-hawlgalayaasha, daneeyayaasha, iyo wakiillada.
Faham buuxa oo ku saabsan naqshadeynta barnaamijyada farshaxanka iyo horumarka, nidaamyada, iyo xiriirinta.
Muujiyay khibrad leh qaabab deeq-siin oo cusub oo ay kujirto iyo gaar ahaan qiimeynta barnaamijka, istiraatiijiyadda istiraatiijiyadda, iyo wada xiriirka deeq-bixiyeyaasha.
Khibrad u helida istiraatiijiyadda qaabeynta iyadoo lala kaashanayo hoggaanka sare iyo saraakiisha barnaamijka, kartida loogu tarjumi lahaa istiraatiijiyaddii mudnaanaha loona lahaa yoolal.
Fahamka ballaaran iyo kan hadda ee qaybta farshaxanka iyo bulshooyinka farshaxanka ah ee Minnesota, oo leh aqoonta ugu horeysa ee ku saabsan kala duwanaanshaha dhaqanka farshaxanka ee gobolka.
Wuxuu muujiyey sida ay uga go'an tahay sii wanaajinta qeexitaanka dhaqan ahaan loo dhan yahay ee heer sare ee fanka.
Awooda muuqaal balaadhan marka la soo dhawaanayo arimaha lana adeegsanayo lens dhaqan ahaan awood u leh.
Karti u helida karti wax ku ool ah oo ay si wada jir ah u fulinayaan ficillada ugu wanaagsan ee lagu gaarayo isku xirnaanta barnaamijka ee ururka oo dhan.
Khibrad toos ah iyo wacyigalin si wax ku ool ah loola shaqeeyo loona taageero jaaliyadaha kala duwan ee farshaxanka, oo ay kujirto qadarinta duruufaha taariikhiga ah, garashada heerka xiriirka iyo dhaqdhaqaaqa awooda, iyo fahamka bulshada, midabka, iyo xaqiiqada qowmiyadeed.
Raaxo leh madmadowga iyo muujinta guusha hogaaminta kooxaha iyada oo loo marayo isbedel, kobcinta jawiga halkaas oo dadku ay ku dhiiradaan in ay intii karaankooda ah ka caawiyaan sidii ururku u gaari lahaa himilooyinkiisa.
Tusaalooyinka xirfadaha isgaarsiinta dadweynaha iyo waaya-aragnimada kaqeybgalka shirarka qaran iyo kuwa heer gobol ahaan ah xubin gole ama hadal muhiim ah.
Firfircoon, hab wanaagsan oo loogu talagalay fursadaha cusub iyo caqabadaha adag ee leh awooda lagu dhisayo isafgarad, helitaan wax lagu kala iibsado, yareynta khilaafaadka, lagu muujiyo masraxa, iyo xallinta masalooyinka.
Heerka Aqoonsi Musharaxnimo
Shahaadada koowaad ee jaamacadeed iyo ugu yaraan 10 sano oo ah khibrad shaqo oo waqti-buuxa ah oo xirfadeed ah ayaa loo baahan yahay; aasaaska / khibradda aan faa'iido doonka ahayn ayaa si weyn loo door bidaa. Shan ama in kabadan oo ah khibrad maamul ama isku darka khibrad u dhigma iyo tababar ayaa loo baahan yahay. Siddeed ama kabadan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan deeq-bixiyaha ama kaalin laxiriirta oo leh khibrad muujineysa horumarinta istiraatiijiyadda iyo mudnaanta-siinta taageerada aagga barnaamijka farshaxanka ayaa loo baahan yahay. Khibrad la shaqeynta gole maareeye, gaar ahaan guddiga qoyska, si weyn ayaa loo doonayaa. Shahaadada Masterka ayaa la door bidaa.
Tani waa meel waqti-dhaaf ah looga dhaafayo xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis. Xaddiga mushaharku waa qiyaastii $165,000 –$173,000.
Ash Talent Solutions LLC wuxuu ku faraxsan yahay inuu matalo fursadan shaqo ee aan caadiga aheyn isagoo matalaya Hay'ada McKnight. U hagaaji wixii weydiin ah Jen Hanlon Ash at jen@ashtalentsolutions.com.
Mudnaanta waxaa la siinayaa musharixiinta codsanaya illaa Janaayo 13, 2020. Booska ayaa furan ilaa laga buuxinayo.
McKnight wuxuu kasbaday aqoonsi qaran oo lagu kobcinayo dhaqan iskaashi, hal abuurnimo, iyo isku darka kaasoo awood siiya kooxahayaga kaladuwan si ay u gaaraan hadafkayaga la wadaago. McKnight waxaa loo magacaabay mid ka mid ah goobaha shaqada ugu fiican loogu talagalay haweenka iyo mid ka mid ah goobaha shaqada ee ugu wanaagsan dalka. McKnight wuxuu bixiyaa aaminaad sare, dhaqan heersare ah kaasoo dhiirigeliya barashada joogtada ah iyo hormarinta guud ahaan aagaga barnaamijka. Xafiisyada Mu'asasada waxay ku yaalaan dusha Mill Museum ee magaalada Minneapolis. Dhismaha astaantiisu waa hannaan abaalmarin naqshadeeye naqshadeyn ah kaas oo naqshadeyn waara iyo dhaqannada dhowritaanka taariikhi ah ay isku darsamaan adeegyo casri ah astaamaha asalka ah iyo alaabada dib loo soo iibsan karo. Waxaa lagu buuxiyaa farshaxanka iyo iftiinka dabiiciga ah, booska wuxuu bixiyaa aragtiyo qurux badan oo magaalada iyo webi webi ah oo kuxiran magaalooyinka iyo jawiga dabiiciga ah sanadka-oo dhan - oo ka tarjumaya himilada Mu'asasada.
Mudnaanta waxaa la siinayaa musharixiinta codsanaya illaa Janaayo 13, 2020.